AASraw waxay siisaa nandrolone badeecada budada soosaarta - Steroid Raws
/blog/Qeybta "Archive" ee "dib-u-habeynta"
Nandrolone Decanoate budada - Nandrolone phenylpropionate powde
阿斯劳 ku qoray nandrolone decanoate, Nandrolone Phenylpropionate .
Waa maxay budada Nandrolone Decanoate (Deca)? Nandrolone Decanoate waa steroid aad u caan ah oo ka kooban hoormoonka hormoonka Nandrolone wuxuuna kuxiran yahay baaxada weyn ee loo yaqaan 'Decanoate ester'. Hormoonka Nandrolone wuxuu markiisii ​​ugu horreysay soo muuqday 1960 waxaana loo sameeyay adeegsiga ganacsiga sanadkii 1962 oo uu sameeyay Organon magaca ganacsiga Deca Durabolin. Tan iyo wakhtigaas badan Nandrolone […]
阿斯劳 ku qoray nandrolone decanoate .
Deca Durabolin, oo badanaa loogu yeero si fudud "Deca", waa magac sumadeed loogu talagalay decanoate Nandrolone (C28H44O3), isboorti anabolic ah oo hagaajiya waxqabadka adoo xoojinaya xoogga iyo istaandarka, yareynta daalka murqaha, iyo si weyn u kordhinaya koritaanka murqaha. Waxay bixisaa guulo aad u tiro badan waqti ka dib iyada oo waxoogaa yar oo saameyn ah marka loo isticmaalo si masuuliyad leh. Waad ku mahadsan tahay noocyada kala duwan ee qiyaasaha waxtarka leh, […]